Sidee Looga Guulaystaa Niyadjabka Koowaad | Hargeysa World~Herald
OpinionSidee Looga Guulaystaa Niyadjabka Koowaad
Dad badan waxa haleeyay, daashaday niyad-jab dhinacyada kala duwan ee nolosha ah, kaasi oo ay dartii gidaaro iyo cidlo la fadhiyaan. Niyadjabkaasi iskuma jiro, kaasi waa kan qofka haleela marka ugu horreysa ee hawshaa ama shaygaas ku cusub yahay.
Nasiibdarro, haddii ay dadkaasi ogaan lahaaheen faa’iidada iyo darsiga ku jira niyad-jabkaa koowaad, in badan ayaa bodhka iska jafi lahaa oo cidlada ka kici lahaa, balse lama wada dareensana.
Maanta waxa aynu maqaalkeena kaga hadli doonaa, sida looga guulasyto niyadjabka koowaad.
1: In aad leedahay hadaf iyo qorshe cad
Lahaanshaha hadaf iyo qorsha cad oo dajisani, waxa uu kaa caawinayaa in uu kuu muuqdo bartilmaameedka aad hiigsanayo ama yoolkaagu, taasina waxa ay awood iyo fursad kuu siinaysaa in aadan ka labalabayn illaa aad ka dhabayso ama gaarto mooyee.
Qofku marka uu leeyahay hadaf cad, una qoran qorshihiisaasi waxa uu ku mintiddayaa gaaridda iyo ka rumaynta yoolashiisaas. Tani waxa ay qofka ka caawinaysaa in marka uu niyad-jab la kulmoba aanu quusan oo faraha ka qaadin hadafkiisa iyo qorshihiisii.
2: In aad ku soo talo gasho guusha iyo guuldaradaba
Sideedaba marka aad garoon soo galayso, waxa og tahay in aad kala soo laabanayso labo mid uun, guul ama guuldaro. Balse taas haddii aadan maanka hore ugu hayn, diyaarna u ahayn natiijada halgankaaga iyo dadaalkaagu ku siiyo, awalba qof garoonka iska yimi baad ahayde, kuma baraarugsanayn in labo natiijo mid uun aad soo qaadanayso.
Guuldaro sideedaba marnaba khasaaro maaha, waa barashada cashar cusub oo hore kaaga maqnaa ama tijaabada dariiq aadan hore u marin oo aadan garanayn halka uu ku dhamaanayo. Waayo-aragnimada iyo khibradaha lagama helo intooda badan guusha, balse waxa laga dhaxlaa khaladaadka la galo iyo tijaabooyinka fashilma. Marka aad labadaa dareensan tahay, si dhabana u fahansan tahay in aad la soo hoyanayso dadaalkaagu halka uu ku gaadhsiiyo, waxa aad niyad-jabka koowaad u arkaysaa, cashar kaa maqnaa oo u baahan in aad daraasayso maanta.
3: In aad wax ka barato khaladaadka
Inta badan khaladaadka dhaca haddii aynaan wax ka baran, tacabka iyo hawlaheenuba miro dhal waligood noqon maayaan. Waxa aynu ognahay in guushuba ay timaado, kadib markii khaladaad badan la soo galay, kadibna sixid lagu sameeyay. Niyadjabka koowaadi waa xanuun, balse inta ka dambaysa waa casharro. Waxa aad baranaysaa waxyaabo badan oo aadan hore u aqoon, u malaysan jirin ama u sawiran jirinba. Noloshu sideedaba waxa ay ka qaadaa imtixaan, kadibna waxa ay ku siisa duruuso iyo casharro nololeed.
4: In aad qaadato masuuliyadda khaladka ama guuldarada
Marka qofku la kulmo niyadjabka koowaad ama ku guuldaraysto hawl, waxa uu ka cararaa masuuliyadda iyo qaadidda eedda hawshaas, laakiin taasi waxa ay muujinaysaa sida shakhsiyadani aanay u ahayn mid qaadi kara masuuliyad weyn iyo xilal culus.
Looma baahna in aad ka orodo khaladaadkaaga iyo guuldarooyinkaaga, si geesinimo leh u qiro khaladkaaga, noloshuna maanta kaliya maahee rajee in isku dayga labaad ama saddexaadba aad ku guulaysanayso.
5: In naftaadu isku kalsoon tahay oo aanay saamayn kugu yeelanayn waxyaabaha dibadda ka soo galayaa.
Haddii aad dadka iska eegayso ama istusayso ama ku raalligalinayso waxa aad qabanayso, kama soo kaban karaysid niyadjabka koowaadba, waayo muraayadda aad isku daawanaysaa waa dad kala duwan oo isku aragti ahayn, una sinayn sida aanay faruhuba u sinayn. Waxyaabaha niyadjabka qofka ku xoojiya waa malaha uu dadka ka malaysanayo sida ay u falanqayn doonaan guuldaradiisa iyo fashilkiisa, laga yaabee in aanay iyaguna warba u hayn xaaladdiisa. Naftaada ku kalsoonow oo go’aanka adiga ayaa iska lahe, dadka yaanay noqon muraayadda aad isku saxayso ama isku toosinayso.
6: Isla-xisaabtan iyo isku-noqosho waa in aad leedahay
Haddii aadan qorshaha iyo hadafka aad dajisatay iskula xisaabtamayn, waxa aad ka hirgalisay iyo waxa kuu hirgali waayay, runtii waxaagu waa hal bacaad lagu lisay. Niyadjab iyo qoomamo halkii aad sariirta kala dul jiifi lahayd, soo qaado buug iyo qalin halka wax ka khaldameen is weyddii, dib-u-eegis ku samee, beddel meelaha wax ka baddelka u baahan, soo kordhi waxa muhiimka kuu ah. Noloshu xiaaab la’aan socon mayso, haddii kale xoolaha waxba ma dhaamaysid.
7: Ilaahay in aad la talo saarato marwalba iyo arrin walba
Bini aadamku xoog iyo xeelad uu leeyahay toona kuma horumaro, kumana kasbado adduunyo, nolol iyo sarreyn, balse la doonista Ilaahay ayuu ku gaadhaa. Marwalba u mahadnaq Allihii ku uumay, heerkaana ku soo gaadhsiiyay, kuna ducayso in tacabkaaga Eebbe kugu guuleeyo.
Ugu dambayn, niyadjabka koowaad in uu ka saameyn iyo xanuun badan yahay ogow kuwa ka dambeeya, balse garasho iyo yaqiin lagaga gudbo.